Ekugcineni usekhaya ngemuva kokuhlala esibhedlela izinsuku eziyi-113 | Scrolla Izindaba
Ekugcineni usekhaya ngemuva kokuhlala esibhedlela izinsuku eziyi-113
Ihlombe liya kodokotela, abahlengikazi nabasebenzi, uMbali Mbatha ekhishwa esibhedlela i-Netcare Milpark ukuyoqala impilo entsha.
Ngemuva kwezinsuku eziyi-113 esibhedlela, umama oneminyaka engama-27 wase-Winchester Hills, eGoli uhlangabezane nalokhu
● Wabeletha nge-C-section
● Wasinda ku-Covid-19
● Futhi wafakelwa iphaphu
Enamaviki angama-29 ekhulelwe uMbali watholakala ukuthi une-Covid-19 mhla zingama-23 kuLwezi ngonyaka odlule. Kanti ngemuva kwalokho watshelwa ukuthi ingane uzoyibeletha ngomthungo.
“Ngesikhathi ngibona ukuthi ngeke ngikwazi ukukhulelwa isikhathi esigcwele ngaphatheka kabi. Ngishayele umyeni wami ucingo, uSizwe, wangehlisa umoya wathi angibadedele bakhiphe ingane,” esho.
Uyakhumbula ebeletha ingane uKuhle endaweni ebandayo futhi equleka.
“Umyeni wami wayengeke abe nami,” kukhumbula uMbali.
Waphaphama ezwa ukuthi ubekwi-coma izinyanga ezimbili nokuthi ufakelwe iphaphu.
“Ukube bekungekhona ukuthi ngithole ukunakekelwa okuyisipesheli engikutholile ngabe angikho namhlanje,” esho.
Kwabe sekuqubuka enye inkinga.
“UMbali ubesengozini enkulu njengoba womabili amaphaphu akhe ayethintekile kusuka phezulu kuya phansi ngenxa ye-pneumonia,” kusho uDkt uPaul Williams, ongudokotela wamaphaphu esibhedlela i-Netcare Milpark.
“Ngokushesha kwakhushulwa ukwelashwa kwakhe.”
Udokotela ohlinzayo we-Cardiothoracic, uDkt uMartin Sussman, uthe uMbali uthathwe waqonda ngqo kwi-ambulensi wayiswa endaweni yokuhlinzelwa lapho abebekwe khona emishinini emufakela umoya ebuchosheni nakwezinye izitho ezibalulekile.
“Le ndlela yokwelashwa empeleni iyiphaphu lokufakelwa. I-circuit yenza umsebenzi wamaphaphu futhi yileyo ndlela esamgcina ngayo uMbali ephila ngenkathi ene-Covid-pneumonia,” kusho uDkt uSussman.
Kodwa ukwelashwa kwakunganele.
“UMbali ugcine eseluleme ku-Covid-19 kodwa amaphaphu akhe awazange alulame,” kusho uSussman.
Ngakho-ke waqeda ukuhlala kwakhe esibhedlela ngokufakelwa amaphaphu.